I-Semalt: Iingcebiso zoPhuculo kwiNkqubo yeNkqubo yokuThumela umPhathi wePython of Dead From Windows OS
I-Python yintsholongwane yekhompyutha ebulalayo ifakwe kwi-computer yomsebenzisi wokugqibela ngaphandleimvume yomnikazi. I-Worm.Python.Agent ingowesapho esibulalayo seentsapho zeTrojan. Ummeli wePython uthathwa njengegciwane elifa kakhulunjengoko kuvumela enye i-malware ukuba ingene kwikhompyutheni emva kokulawula ngokupheleleyo. Intsholongwane yePython inokukwazi ukunciphisa ukusebenza ngokubanziyakho khomputha - are you a computer expert.
Inambuzane.Python.Agciwane leAgent liqokelela idatha yakho ebalulekileyo kwaye iguqula ukuzeabahlaseli bangakwazi ukulawula ngokuzenzekelayo i-PC yakho yodwa ngaphandle kwemvume yakho. Ukuphequlula kwi-intanethi ngaphandle kwintsholongwane ye-anti-virusyingozi kakhulu. Abasebenzisi bekhompyutha abasebenzisa ukukhuphela isofthiwe samahhala baxhatshazwa ukufaka le ntsho longwane. Ummeli wePython uyingoziintsholongwane ebuye iguqula izicwangciso zakho zokukhangela ngokuguqula ukucwangciswa kwasekuqaleni. Emva kokulawula isiphequluli sakho, intsholongwane yePythonulungisa umsebenzisi wekhomputha kwikhasi elibi.
uJulia Vashneva, umphathi weMatriki oPhumeleleyo kuMphumeleli iSemalt ,icacisa ngezizathu zentsholongwane ye-Python isifo kunye nendlela yokulahla ngayo.
Ukufaka intsholongwane yePython kwikhompyutheni yakho kukuchazela kubacuki abanobungozi abanakhoufikelele kwiintetho zakho ze-intanethi, iiphasiwedi zeakhawunti kunye neenkcukacha zebhanki kwi-intanethi. Impembelelo yengozi iphezulu kakhulu.Inambuzane.Python.Agent igxina kwi khomputha yakho ngeendlela ezilandelayo:
Ukukhuphela isofthiwe samahhala kumakethi.
Ukuxhuma ikhompyutha yakho kunye nee-USB ezinegciwane kunye nezinye izinto zokugcina.
Ukuchofoza ukunyuka kwezinto ezinobungozi xa ufaka.
Indlela yokukhusela i-PC yakho ekubeni isulele kwi-Worm..I-Python.Agciwane leAgent
Gwema ukuchofoza ii-pop-ups xa ushaya.
Njalo sebenzisa indlela yokufakela isiko xa ufaka isofthiwe yokukhuphela.
Ukufaka i-premium anti-virus kwi-PC yakho.
Ukususa ummeli wePython ukusuka kwi-PC yakho usebenzisa indlela yokuhamba
Inkomo.Python.Agent ingasuswa kwikhompyutha yakho ngesandla ngokutshintsha inkquboizicwangciso zefowuni ukufikelela kwiifayile ezifihliweyo kunye nerejista kwi-PC yakho. Cofa iqhosha 'Hlanganisa' kwaye nqakraza ifolda ngokubhalisa okufihliweyoiifayile. Cofa 'Ok' ukususa iifayile zobhaliso kwaye usebenzise kwiinguqulelo.
Ukususa igciwane le-Python Agent kwi-Windows OS yakho
Awuyi kukhwankqiswa xa ufumanisa ikhomputer yakho inetyholwe yi-Worm.Python.Agentintsholongwane. Cofa iqhosha le 'Qalisa Imenyu' kwaye ukhethe zonke iiNkqubo ezifakwe kwikhompyuter yakho. Khipha zonke iinkqubo ezinobungozi njengePythonintsholongwane efakwe kwikhompyuter yakho ngokuchofoza 'Ukukhipha okanye ukutshintsha inkqubo' ephantsi kwePaneli yoLawulo.
Uninstalling Worm.Python.Agciwane leAgent kwisiphequluli sakho
Ukukhipha iinkqubo ezinobungozi ezilawula umlando wakho wokukhangela, yiya kwiIsiphequluli se-Chrome uze ukhethe 'Imenyu'. Yiya kwizicwangciso eziphambili kwaye nqakraza ukongezwa. Cofa kwi 'Idoti yecala' ngaphantsi kwezandiso kwayenqakraza 'Susa' ukhetho. Ukusebenzisa abasebenzisi bekhomputha usebenzisa i-Internet Explorer, khetha ulawulo lwe-'Ad-on 'kwaye nqakraza iqhosha elithi' Izixhobo '. Khetha'I-Toolbars kunye neZandiso' kwaye uphendule intsholongwane yePython. Cofa 'Susa' ukususa isigxina kwi-khompyutha yakho.
Inkomo.Python.Agent yintsholongwane ebulalayo elawula ulawulo lwakho lwekhompyuthakunye nembali yokukhangela. Emva kokufakwe kwikhompyutha yakho, i-virus yePython iqokelela idatha yakho efanelekileyo kwaye ikwabelana ngolwazi ngolwaziAbahlaseli abanobungozi abafumana inzuzo kuwe. Ukuthintela le ntsho longwane kwi-PC yakho, hlaziya uhlaziya intsholongwane yakho kwaye uhlelweiiskrini ezichanekileyo zokufumana nokukhusela nayiphina inkqubo enobungozi ekuthinteleleni ikhompyutha yakho.